Ukukhetha indawo yokuhlala eqashiwe, udinga ukunquma kusengaphambili ngemibuzo embalwa. Isibonelo, kulula ukufika ekhaya elisha? Ingabe inani lefulethi lilingana nesimo nesayizi? Ingabe kukhona isikhala esanele sokwakha izindlu ezintsha zokuphila okunethezeka kuwo? Futhi ingabe kukhona ifenisha efulethini elishiye kubanikazi noma abaqashi abadlule?
Njengomthetho, kunoma yiliphi indlu eqashiwe kukhona isethi encane yezinga elijwayelekile, ifenisha "eyisisekelo": itafula ekhishini, izihlalo eziningana, isiqandisisi, ikhebula. Ngezinye izikhathi kukhona i-TV kanye ne-microwave futhi, yebo, kukhona njalo umbhede lapho.
Masikhulume ngemibhede ezindaweni zokuqasha
O, lezi zibhebhe (noma ama-sofas amaningi) ezindaweni zokuqasha! Izinhlobo ezivame ukusetshenziselwa izikhathi eziningi, zihlale zenza imizwa exubile. Yiqiniso, ukulala embhedeni omusha kuxazulula ezinye izinkinga eziningi - akudingeki uhlupheke, uthwale umbhede wakho, awudingi ukuthenga ifenisha eyengeziwe, kufanele uzibuze ukuthi uthenge ama-mattresses amahle lapha, isibonelo. Kodwa ngakolunye uhlangothi, kuphakama imibuzo eminingi. Okokuqala, akukhona lapho, ngokusobala, embhede omusha wabashayeli abancane - izimbungulu. Futhi, okwesibili, ama-mattresses ahlanzekile kanjani?
Ukuzikhulula ngesidingo sokuzibona wena, kungcono ukunakekelwa impilo yakho kanye nenduduzo kusengaphambili. Cha, ukuthenga imibhede emihle lapha akusiyona ikhambi elihle kakhulu. Kodwa, ngokwesibonelo, ungakwazi ukuhlanza imithwalo nomatizi. Ungakwazi ngisho nokuphatha ubuso ngezinye izindlela zokulwa nezimbungulu. Ngenhlanhla, ama-sprays anamuhla angenangqondo. Noma kunjalo ungakwazi ukukhipha imilenze ebhodini okwesikhashana, noma ukukhipha kahle - lokhu kuzosindisa kokubili uthuli kanye nephunga.
Futhi-ke, uma ufaka izindlu ezintsha, kufanele ubeke ama-linens akho ahlanzekile. Yiqiniso, kwezinye izimo, nasezindlini eziqashiwe zihlinzeka ngamashidi nezikhonkwane ze-duvet - ikakhulukazi uma indawo idonswa amahora nezinsuku. Kodwa ngisho-ke ukuhlanzeka kweveli kufanele kuxoxwe.
Ikhishi kufanele lihlanzeke
Zonke ezinye ifenisha ezitholakala endlini eqashiwe noma ekamelweni zingelashwa kakhulu. Ngaphandle kokuba i-oven microwave kanye nesitofu segesi kufanele ihlanzwe izikhathi ezimbalwa. Ekhishini, ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe kuphela esiqandisini. Yilokho, nakanjani udinga ukuyikhulula bese uyisula kahle. Futhi ungenzi nje kuphela ukugcina ukuhlanzeka, kodwa futhi ukuvikela impilo yabo. Phela, ngisho noma abanikazi bezindlu bezinhle kakhulu futhi bakha kahle abantu, aziwa ukuthi yimiphi imikhiqizo egcinwe efrijini ngabaqashi abadlule. Kodwa kuthiwani uma kukhona into eyingozi?
Ukufingqa, umuntu angasho into eyodwa: ukuthi ukuphila endaweni eqashiwe kwakunokuthula futhi kukhululekile, ezinye izinto kufanele zizinakekelwe ngempela. Futhi ukuhlanzeka kungenye yezingqinamba eziyinhloko kule "uhlu olugunyazayo". Ikakhulukazi - ukuhlanzeka kulezo zindawo lapho abadli badla khona isidlo kanye nokuphumula.
Isifo sokukhathala okungamahlalakhona: Ukwelashwa, Izimpawu kanye Izimbangela
Kuyini celandine. Warts, ama-polyp Sikhombisa ngosizo yayo